Caalamka, 04 July 2018
Arbaco 4 July 2018
Daacish oo sheegtay inuu dhintay wiilka al-Baghdadi
Wiilka hogaamiyaha kooxda Daacish Abu Bakar al-Baghdadi ayaa ku dhintay howlgal ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Homs ee galbeedka dalka Syria, sida ay baahisay warbaahinta Daacish ee al-Nashir News.
Malaysia: Najib Razak oo maxkamad lasoo taagey
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Najib Razak, ayaa maanta si rasmi ah loogu soo oogay dacwado lala xiriira fadeexad musuq-maasuq oo balaayin dollar ah.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Malaysia oo la xiray
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Najib Razak, ayaa maanta la xiray ayada oo lala xiriirinayo fadeexad musuq-maasuq oo balaayin dollar ah.
Rabshado ka dhashay biyo yaraan oo ka dhacay Iran
Warbaahinta dalka Iran ayaa ku warrantay in goor dambe oo axaddii ah ay isku dhaceen booliska iyo dadweyne ka banaanbaxayey biyo yari iyo hawada wasaqeysan ee koonfurta galbeed ee dalkaas.
Imaaraadka oo joojiyey weeraradii Xuutiyiinta
Iskudhacyo Israel iyo Falastiin ku Dhexmaray Marinka Gaza
Saraakiisha caafimaadka magaalada Gaza ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan laba ruux oo Falastiiniyiin ah ay dhinteen kadib isku-dhacdyo Jimcihi shalay Marinka Gaza ku dhexmaray ciidamada Israel iyo dad Falastiiniyiin oo mudaaharaad ka dhigay xadka Gaza.
Midowga Yurub oo heshiis ka gaaray qaxootiga
Hogaamiyayaasha Midowga Yurub ayaa maanta heshiis ka gaaray dadka muhaajiriinta ah ee qaaradda imanaya.
Myanmar: Saraakiil lagu eedeeyay gaboodfal
Hey’ada Xuquuqda Aadanaha u doodda ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heyso daliilo cad oo muujinaya in 13 sarkaal oo ka tirsan ciidamada Myanmar ay galeen xadgudubyo ka dhan ah aadanaha.
Israel 'oo duqeysay magaalada Dimishiq'
Warbaahinta dowladda Syria ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo Israel ay soo tuurtay ay ku dhaceen bartilmaameedyo ku yaalla meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimishiq.
Falastiiniyiinta oo u jawaabay Jared Kushner
Turkiga oo ka aargutay canshuurtii Trump